China Jack, yakatwasuka jack, yakamira jack, hydraulic jack fekitori uye vagadziri | Boda
Hole Vakaona Chikamu
Drill Bits Uye Chisels Chikamu
Kucheka Nereza & Kukuya Wheel Chikamu
Ruoko Zvishandiso Chikamu
Multifunctional Chishandiso Sets Sets, socket set, chishandiso seti, DIY maturusi akaiswa
Zvipikiri, Screws, Fasterners, Nylon Ties Etc.Category
Yakachengeteka, isina moto simbi, zvigunwe zvemunwe kodhi kukiya, ese marudzi akachengeteka
Angle grinder, kukanganisa kukanda, sando, li-ion chibooreso, maturusi emagetsi
Yemagetsi tepi, kupisa kutsigira tepi, PVC tepi, kuputira tepi
Welding muchina, DC Welding muchina, AC Welding muchina, Welded mask, Welding accessories
PVC inonaya prrof jira, Pe mvura inonongedza jira, chifukidzo cherori
Padlock, kutevedzera mhangura yekukiya, isina simbi yekuvhara, shizha rakavhara, anti-kubavha yekukiya, password yekukiya, yeminwe yekukiya uye mamwe makiyi
Cheni, yekusimudza cheni, kwakakurudzira cheni, isina simbi cheni, kwakasiyana kurondedzerwa
Pisa inonyungudutsa pfuti yeglue, pfuti yemagetsi yesimbi, pfuti yemhepo inopisa, pfuti yekutungidza yepurasitiki, tin absorber
Jack, yakatwasuka jack, yakamira jack, hydraulic jack
Zvinhu zveNylon, zvisungo, kutsungirira kwakanyanya, prot ...
Yekushandisa chishandiso, gungano rekushandisa, gadziriso yemota, DIY ku ...
Dual chinangwa wrench, ratchet mbiri-chinangwa wrench, mo ...
Diamond achicheka reza, nedhaimani akaona reza, zvedongo Tile ...
Sando yemagetsi, yemagetsi dhiza chisel, SDS, Max, Iye ...
Kumonyanisa chibooreso, Stainless simbi chibooreso ikakuruma, simbi chibooreso ...
Electric sando chibooreso ikakuruma, kongiri chibooreso ikakuruma, SDS, ...
Kuvaka chibooreso zvishoma, yakawanda-inoshanda chiwanikwa chibooreso ...
TCT gomba saha, gomba chibooreso, simbi simbi mugomba saha, simende ...
HSS mugomba saha, simbi mugomba saha, simbi mugomba saha, yakakwirira qu ...
Diamond girazi zvedongo saha, girazi chibooreso, girazi holw akaona ...
42 Bi-Metal Hole yakaona yehuni simbi, Yakaonekwa sei, Gypsum ...
Jack anonyanya kushandiswa mumafekitori, migodhi, zvekufambisa uye mamwe madhipatimendi sekugadzirisa mota uye kumwe kusimudza, kutsigira uye rimwe basa. Chimiro chakareruka, chakasimba, chinoshanduka uye chakavimbika, uye chinogona kutakurwa nekuitwa nemunhu mumwe.
Jack ndiyo yakapusa yekusimudza michina ine diki yekusimudza kukwirira (isingasvike 1m). Iine mhando mbiri: mechanical uye hydraulic. Iyo yemuchina jack ine rack mhando uye sikuruu mhando. Nekuda kwesimba rayo diki rekusimudza uye nekushanda kunoshanda, inowanzo shandiswa chete kumagetsi ekugadzirisa uye haina kukodzera kugadzirisa zambuko. Hydraulic jack ine compact dhizaini, rakasimba basa uye yekuzvivharira yega basa, saka rinoshandiswa zvakanyanya. Kukanganisa kwayo ndeyekuti kukwirira kwekusimudza kunogumira uye kumhanya kwekusimudza kunononoka.
Zvinoenderana nemaitiro akasiyana ekugadzira, pane michina majeki uye majekiseni emagetsi. Nheyo dzakasiyana. Mukudaro, iyo yakakosha musimboti weiyo hydraulic kufambisa ndiyo Pascal's musimboti, ndiko kuti, kumanikidzwa kwemvura kwakafanana kwese kwese. Muhurongwa hwakadzikama, kumanikidza kunoitwa pisitoni diki pane kushoma pane iyo pisitoni hombe Simba racho rakakurawo, rinoita kuti mvura irambe iripo.
Naizvozvo, kuburikidza nekufambisa kwemvura, tinogona kuwana kumanikidzwa kwakasiyana pamipendero yakasiyana, kuti tikwanise kuzadzisa chinangwa chekushandurwa. Yedu yakajairwa hydraulic jack ndeye kushandisa chirevo ichi kuti uwane simba rekufambisa. Iwo echimakanika musimboti wesikuru jack ndeyekudhonza mubato kumashure uye mberi, dhonza nzara kusundira ratchet clearance kutenderera.
Iyo diki bevel giya inotyaira iyo hombe bevel giya uye inoita yekusimudza sikuruu tenderera, kuitira kuti ruoko rwekusimudza rungasimudzwa kana kudzikiswa
kuzadzisa basa rekusimudza kusagadzikana. Asi kwete sezviri nyore se hydraulic jack.
Musiyano uripo pakati peiyo yakatwasuka jack nejack yakatwasuka ndeiyi: nyore kushanda, yakakura kusimudza kugona kweiyo yakatwasuka jack, yakakodzera mota hombe. Iyo yekumira jack iri nyore kushanda uye yakakodzera trolley.
Vertical jack: kushandisa hydraulic musimboti, zvakasiyana neyechinyakare mechijack jack, irori yakasungirirwa yekusimudza chishandiso neyakareruka mashandiro, kuchengetedzeka, kuvimbika, kuchengetedza kwevashandi uye kwakasimba kushomeka.
Nhasi, sekureba sekupaka kana gasi chiteshi, iwe unogona kuona iyo hydraulic crane, kuishandisa kushandisa simba remwana kunogona kusimudza mota.
BOSENDA inopa yakateedzana yejack kumusika wekunze kwenyika, tinogona kuita OEM neODM, kuti uwane rumwe ruzivo, sununguka kutaura nesu.
Pashure: Pisa inonyungudutsa pfuti yeglue, pfuti yemagetsi yesimbi, pfuti yemhepo inopisa, pfuti yekutungidza yepurasitiki, tin absorber
Zvinyorwe kune tsamba yedu kugara up-to-date pamwe zvedu kushambadza, dhisikaundi, kutengesa, uye anokosha zvinopihwa
Kero: 3rd pasi, Kwete. 300, North Chouzhou Rd., Yiwu guta, Zhejiang dunhu, China
Muvhuro-Mugovera, 9 AM-10PM